KEDU KA ESI BELATA NHA FOTO, IHE OYIYI? MKPAKỌ KACHASỊ! - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Kedu ka esi belata nha foto, ihe oyiyi? Mkpakọ kachasị!
Ndewo Ugboro ugboro, mgbe ị na-arụ ọrụ na faịlụ dị iche iche (foto, foto, na ihe oyiyi ọ bụla) ọ dị ha mkpa ịbịakọta. Ọtụtụ mgbe, ọ dị mkpa ịnyefee ha na netwọk ma ọ bụ tinye na saịtị ahụ.
Nagbanyeghi na taa enweghi nsogbu na mpịakọta nke draịva siri ike (ma ọ bụrụ na ọ gaghị ezuru, ị nwere ike ịzụta HDD ọzọ maka 1-2 TB ma nke a ga-ezu maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke foto ndị dị elu), chekwaa oyiyi na àgwà ị gaghị achọ - ọ bụghị n'onye ezi omume!
N'isiokwu a, achọrọ m ịtụle ọtụtụ ụzọ m ga - esi were mpịakọta na ibelata ihe oyiyi ahụ. N'ihe atụ m, m ga-eji foto mbụ mbụ m nwetara na weebụ ụwa.
Ụdị ihe oyiyi kachasị mma
Otu esi belata onu nke ihe oyiyi na Adobe Photoshop
Ngwaọrụ ndị ọzọ maka mkpakọ foto
Ọrụ ịntanetị maka mkpakọ foto
1) bmp bụ ihe osise nke na-enye mma kacha mma. Ma ị ga-akwụ ụgwọ maka ogo nke oghere nke foto ndị a zọpụtara na usoro a. Ogo foto ndị ha ga-eketa nwere ike ịhụ na nseta ihuenyo №1.
Nseta ihuenyo 1. 3 foto na bmp ụdị. Lezienu uba nke faịlụ.
2) jpg - usoro kachasị ewu ewu maka foto na foto. Ọ na-enye ezi mma dị mma na mkparịta ụka dị egwu. Site n'ụzọ, biko mara na foto ahụ nwere mkpebi nke 4912 × 2760 na nchịkọta bmp chọrọ 38.79MB, na na jpg naanị naanị: 1.07 MB. Ee ihe osise dị na nke a bụ ihe dị ka ugboro 38!
Banyere àgwà: ọ bụrụ na i meghị ka foto ahụ dị elu, ọ gaghị ekwe omume ịmata ebe bmp dị, na ebe jpg na-agaghị ekwe omume. Ma mgbe ị na-amụba ihe oyiyi na jpg - blurring amalite igosipụta - ndị a bụ mmetụta nke mkpakọ ...
Nseta ihuenyo 2. 3 foto na jpg
3) (ndị na-ahụ maka netwọk ndị dị na netwọk) bụ ụzọ dị mfe maka ịnyefe foto na Ịntanetị (* - na ụfọdụ, ihe oyiyi ndị dị na usoro a na-ewere ọbụna obere ohere karịa jpg, na àgwà ha dị elu!). Nye nwa mmeputa ka mma ma ghara iduhie foto a. A na-atụ aro ka ị jiri ihe oyiyi ndị na-ekwesịghị ịla n'iyi na nke ịchọrọ ị bulite na saịtị ọ bụla. Site na ụzọ, usoro a na-akwado nzụlite ntụgharị.
Nseta ihuenyo 3. 3 foto dị na png
4) Gif bụ ihe a na-ewu ewu maka foto na ihe nkiri (maka nkọwa nkọwa: Ọkpụkpọ a dịkwa mma maka ịnyefe foto na Ịntanetị.) N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na-enye ọnụ ọgụgụ dị ntakịrị karịa karịa na jpg.
Nseta ihuenyo 4. 3 foto na gif
N'agbanyeghị nnukwu ụdị ụdị faịlụ dịgasị iche iche (na e nwere ihe karịrị iri ise), na Ịntanetị, na n'ezie, a na-ahụkarị faịlụ ndị a (edepụtara n'elu).
N'ozuzu, n'ezie, maka mkparịta ụka dị mfe (ntụgharị site na otu usoro gaa na nke ọzọ), ịwụnye Adobe Photoshop agaghị abụ onye a kwadoro. Ma usoro a dị ezigbo mma ma ndị na-arụ ọrụ na foto, ọbụna ọbụghị mgbe niile, nwere ya na PC.
1. Mepee foto na mmemme ahụ (ma site na menu "Njikwa / oghe ..." ma ọ bụ mkpọchi bọtịnụ "Ctrl O").
2. Gaa na menu "faịlụ / chekwaa maka weebụ ..." ma ọ bụ pịa igodo bọtịnụ "Alt + Shift + Ctrl + S". Nhọrọ a nke iziputa ndi mmadu na-acho acho ihe kachasi ike nke onyinyo ahu na obere ihe nfe ya.
3. Debe ntọala nchekwa:
- Ọkpụkpọ: Ana m akwado ịhọrọ jpg dịka ọkwa kachasị ewu ewu;
- àgwà: dabere na àgwà ahọrọ (na mkpakọ, ị nwere ike ịtọ site na 10 ruo 100) ga-adabere na nha nke foto ahụ. N'etiti etiti ihuenyo ahụ ga-egosi ihe atụ nke ihe oyiyi ejiri dị iche iche.
Mgbe nke ahụ gasịrị, zọpụta foto - ogo ya ga-abụ ntụpọ dị ntakịrị (karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ na bmp)!
Foto ahụ mejupụtara wee malite ịdị na-erughị ihe dị ka ugboro 15: site na 4.63 MB dị na 338.45 KB.
1. Onye na-ekiri ihe nkiri
Nke weebụsaịtị: http://www.faststone.org/
Otu n'ime mmemme kachasị ngwa ngwa na nke kachasị mfe maka ịlele ihe oyiyi, nhazi ngwa ngwa, na, n'ezie, mkparị ha. Site n'ụzọ, ọ na-enye gị ohere ịlele foto ọbụna na ụlọ nchekwa ZIP (ọtụtụ ndị ọrụ na-arụnye AcdSee maka nke a).
Tụkwasị na nke ahụ, Fastone na-enye gị ohere belata ọnụ ọgụgụ iri na iri ise na ozugbo!
1. Mepee folda ahụ na foto, wee jiri òké ndị ahụ na-achọ mpikota onu, wee pịa "Nhazi / Nhazi usoro".
2. Na-esote, anyị na-eme ihe atọ:
- nyefee ihe oyiyi si n'aka ekpe ruo n'aka nri (ndị anyị chọrọ mpikota onu);
- họrọ usoro nke anyi choro ichikota ha;
- ezipụta nchekwa ebe ịchekwa foto ọhụrụ.
N'ezie niile - mgbe nke ahụ gasịrị pịa bọtịnụ mmalite. Site n'ụzọ, na mgbakwunye, ịnwere ike ịtọ ntọala dị iche iche maka nhazi oyiyi, dịka ọmụmaatụ: akụkụ akuku, mgbanwe mgbanwe, tinye logo, wdg.
3. Mgbe usoro mkparịta ụka - Ngwa ngwa ga-akọ banyere ego ole nchekwa nchekwa dị.
Onye Mmepụta saịtị: http://www.xnview.com/en/
Ihe omume mara mma ma dị mfe maka ịrụ ọrụ na foto na foto. Site n'ụzọ, m degharịrị ma jikọta foto maka isiokwu a naanị na XnView.
Ọzọkwa, ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịme ihe ntanyepụ nke windo ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ nke ya, dezie ma lelee faịlụ pdf, chọta foto ndị yiri ya ma wepụ duplicates, wdg.
1) Iji mpịakọta foto, họrọ ndị ịchọrọ ịhazi na windo nke usoro ihe omume ahụ. Gaa na menu Ngwaọrụ / Batch Processing.
2) Họrọ usoro nke ịchọrọ iwepụta ihe oyiyi ahụ ma pịa bọtịnụ mmalite (ị nwekwara ike ịtọ ntọala mkpakọ).
3) Ihe si na ya pụta bụ ihe dị mma, ihe osise ahụ na-ejikọta ya.
Ọ bụ n'ụdị bmp: 4.63 MB;
Gbanyere na jpg usoro: 120.95 KB. "Anya na anya" dị ka otu!
Onye Mmepụta saịtị: //luci.criosweb.ro/riot/
Ihe ọzọ na-akpali mmasị maka mkparịta ụka. Ihe kachasị mkpa dị mfe: ị mepee foto ọ bụla (jpg, gif ma ọ bụ png) n'ime ya, mgbe ahụ ị na-ahụ windo abụọ: n'otu foto dị na ya, na nke ọzọ ihe na-eme na mmepụta. Ntughari RIOT na-agbakwụnye n'eleghị anya ka foto ahụ ga-atụle mgbe mkparịta ụka, gosikwa gị àgwà mkpakọ.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na ya bụ ụba nke ntọala, eserese nwere ike ịbịakọta n'ụzọ dị iche iche: mee ka ha ghọtakwuo ma ọ bụ gụnye ntutu; Ị nwere ike gbanyụọ agba ma ọ bụ naanị shades nke otu ụdị agba.
Site n'ụzọ, ohere buru ibu: na RIOT ị nwere ike ịkọwa ụdị nchịkọta ị chọrọ na usoro ihe omume ahụ ga-ahọrọ na-akpaghị aka na ntọala ma setịpụ àgwà mkpado foto!
Nke a bụ obere nsonaazụ nke ọrụ ahụ: a na-ejikọta foto ahụ na 82 KB site na 4.63 MB faịlụ!
N'ozuzu, Onwe m anaghị amasị mpeepe foto site na iji ọrụ ịntanetị. Mbụ, ana m atụle ya ogologo oge karịa usoro ihe omume, nke abụọ, na ọrụ ntanetị ọ dịghị ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ, na nke atọ, m ga-ebugo ka ọ bụghị foto niile gaa na ọrụ ndị ọzọ (mgbe niile, enwere foto ndị ị na-egosi na Ezigbo ezinụlọ).
Ma ọ dịghị ihe ọzọ (mgbe ụfọdụ oke umengwụ iji wụnye mmemme, maka nrụpụta 2-3 foto) ...
Ọrụ dị ezigbo mma maka ihe nrụgide. Otú ọ dị, enwere oke njedebe: ogo nke onyinyo ahụ ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 10 MB.
Ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa, enwere ntọala maka mkpakọ. Site n'ụzọ, ọrụ ahụ gosipụtara ọnụ ọgụgụ dị ntakịrị. Na-emetụ foto ahụ, n'ụzọ, na-enweghị ọdịda nke àgwà.
Nke a na saịtị dị mma maka ndị na-achọ mpikota onu ihe oyiyi usoro jpg na-enweghị ọnwụ nke mma. Ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa, ọ gosipụtara ozugbo na ọnụ ọgụgụ foto ahụ na-ebelata. O kwere omume, site na ụzọ, iji chọpụta àgwà mkpakọ nke mmemme dị iche iche.
N'ihe atụ nke dị n'okpuru, foto a belata 1,6 ugboro: site na 9 KB na 6 KB!
3. Njikwa ihe oyiyi
Ezi ọrụ dị mma. M kpebiri ịlele otú esemokwu ahụ si jikọtara ya site na ọrụ gara aga: ma ị mara, ọ bịara bụrụ na ọ gaghị ekwe omume nchịkọta ọbụna karịa na enweghi àgwà efu. N'ozuzu, ọ bụghị ihe ọjọọ!
Ihe na-amasị ya:
- ọrụ ngwa ngwa;
- nkwado maka ọtụtụ usoro (a na-akwado ndị kasị ewu ewu, lee isiokwu dị n'elu);
- na-egosi otu esi ejikota foto ahụ ma kpebie ma ị ga-ebudata ma ọ bụ. Site n'ụzọ, akụkọ dị n'okpuru na-egosi ọrụ nke ọrụ a.
Nke ahụ bụ maka taa. Onye ọ bụla kachasị ...!